Fetiraiza Granulator Fekitori | China Fertilizer Granulator Vagadziri, Vatengesi
Iyo Nyowani Type Organic & NPK Compound Fertilizer Granulator Machine iri mhando yemuchina wekugadzirisa poda yakasvibirira zvigadzirwa kuva granules, inokodzera yakakwira nitrogen yezvigadzirwa zvemukati senge organic uye inorganic komputa fetiraiza.
Iyo Nyowani Type Organic & Compound Fertilizer Granulator shandisa zvakazara simba rezvemuchadenga rinogadzirwa neiyo-yekumhanyisa-kutenderera michina inokonzeresa simba musilinda kuti zviite zvakanaka zvigadzirwa zvinoramba zvichisanganiswa, granulation, spheroidization, extrusion, kurovera, kuumbana uye kusimbisa, pakupedzisira kuita granules.
Iyo Disc Organic & Remubatanidzwa Fertilizer Granulator Muchina (inozivikanwawo sebhokisi ndiro) inotora iyo yese yakatenderera arc chimiro, uye iyo granulating chiyero inogona kusvika inopfuura 93%.
Michina Drum Granulator (inozivikanwawo semadhiramu ekubhowa, rotary pelletizer kana macry granulators) chishandiso chakakurumbira michina inogona kugadzirisa yakawanda mbishi zvigadzirwa. Iyo michina inowanzo shandiswa pamwero mukuru kugadzirwa kwemubatanidzwa fetiraiza neinotonhora, inopisa, yakakwira yevasungwa uye yakaderera kudzikira. Iyo muchina ine zvakanakira yakakwira bhora inoumba simba, yakanaka chitarisiko mhando, ngura kuramba, yakaderera simba kudyiwa uye hupenyu hwakareba hupenyu. Simba diki, hapana matatu marara anobuda, kugadzikana mashandiro, nyore kugadzirisa, inonzwisisika maitiro dhizaini, epamberi tekinoroji, yakaderera kugadzirwa kwemitengo. Rotary Drum Komputa Fertilizer Granulators zvinoshandiswa kana kusangana - kwemakemikari maitiro maitiro kuchidiwa.
Iyo Flat Die Fertilizer Extrusion Granulator Muchina inowanzoshandiswa kugiriniza fetiraiza, iyo granules inogadzirwa nemuchina ine yakatsetseka uye yakachena pamusoro, kuomarara kuomarara, yakaderera tembiricha shanduko panguva yekuita, uye inogona kuchengeta zvinovaka muviri zvezvinhu zvakasvibirira chaizvo.
Iyo Double Screw Inoburitsa Granulator Machine ine zvakanakira kuvimbika kwekuita, yakakwira granule-yekuumba chiyero, yakafara kugadzikana kune zvigadzirwa, yakaderera kushanda tembiricha uye hapana kukuvara kune zvinhu zvinovaka muviri. Inoshandiswa zvakanyanya mukukanda chikafu, fetiraiza uye mamwe maindasitiri.
Nyowani Type Organic Fertilizer Granulator inoshandiswa kugadzira granulate bhora chimiro chese zvakananga kuburikidza nekushandisa ese marudzi ezvinhu ehupenyu mushure mekuvira uye kupwanya.